‘ग्यास सिलिन्डरलाई छोराछोरीलाई जस्तै माया गर्नुपर्छ’ – Arthik Awaj
‘ग्यास सिलिन्डरलाई छोराछोरीलाई जस्तै माया गर्नुपर्छ’
By आर्थिक आवाज २०७५ पुष ७ गते शनिबार ०४:२१ मा प्रकाशित
अध्यक्ष, गृहलक्ष्मी ग्यास कम्पनी प्रा.लि.
गृहलक्ष्मी ग्यासको उद्योग पोखराको लेखनाथस्थित गगनगौडामा छ । गण्डकी प्रदेशका उपभोक्तामाझ गृहलक्ष्मी ग्यास कम्पनी प्रा.लि.ले आफ्नो उत्पादन पु¥याइरहेको छ । गृहलक्ष्मी ग्यासका विशेषता, ग्यास प्रयोग गर्दा ध्यानदिनुपर्ने कुराहरु लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर प्रालिका अध्यक्ष धर्मराज बर्तौलासँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीको सारः
गृहलक्ष्मी ग्यासको बजार अवस्था कस्तो छ ?
२०५१ सालमा गृहलक्ष्मी ग्यास कम्पनीको स्थापना भएको हो । गण्डकी प्रदेशमा यस ग्यासको माग उच्च छ । सबैको माया हामीले पाएका छौं । उपभोक्ताको बीचमा हामी लोकप्रिय बन्न सफल छौं । गण्डकी प्रदेशका अधिकांश उपभोक्ताले गृहलक्ष्मी ग्यास प्रयोग गर्नुहुन्छ ।
गृहलक्ष्मी ग्यासको विशेषता के छ ?
पोखरा महानगरको गगनगौंडामा ग्यास कम्पनी छ । अन्य कम्पनीका ग्यास नआउदा पनि हामीले उपभोक्तालाई ग्यास दिइरहेका छौं । सहज तथा सरल तरिकाले सुपथ मूल्यमा हामी ग्यास उपलब्ध गराउछौं । हामीले पर्याप्त मात्रामा ग्यासको माग पुरा गरिरहेका छौं । स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएका सामान प्रयोग गर्नुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन भएको ग्यास प्रयोग गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।
उपभोक्ता कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
बिगतमा धेरै संकट तथा समस्याको अवस्थामा पनि हामीले उपभोक्तालाई सहज रुपमा ग्यास उपलब्ध गराएका छौं । सबैले यसलाई महसुस गर्नुभएको छ । उपभोक्ता हामीसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । ग्यासको मूल्य कति छ भनेर उपभोक्ताले बुझ्नु जरुरी छ । कहिले काही कायम मूल्य भन्दा धेरै तिर्ने गरेको पनि हामीले पाएका छौं । डिलरबाट ग्यास किन्दा त्यसको मूल्य १४ सय रुपैयाँ पर्छ ।
अन्य के–कस्ता कार्यक्रमहरु गर्दै आउनुभएको छ ?
हामीले समय समयमा जानकारीमूलक विभिन्न कार्यक्रम पनि गर्दै आइरहेका छौं । ग्यासलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी सुरक्षित बन्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउछौं । उपभोक्तालाई सहज होस भनेर हामीले हटलाइन नम्बर पनि सञ्चालन गरेका छौं ।
ग्यासको प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सचेतनाहरु केके छन् ? उपभोक्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
ग्यास प्रयोग गर्दा उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ । सिलिन्डरलाई घाम पानीबाट जोगाउनुपर्छ । जथाभावी गुडाउनुहुँदैन । यसबाट पनि दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ । सिलिन्डरमा ग्यास छ कि छैन भनेर हेर्नु जरुरी छ । ग्यास लिक भएमा डिलरमा खबर गर्नुपर्छ । काम सकिएपछि रेगुलेटर बन्द गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय रेगुलेटर प्रयोग गर्नुपर्छ । अभिभावकले छोराछोरीलाई जस्तै गरेर उपभोक्ताले ग्यासको सिलिन्डरलाई माया गर्नुपर्छ । सिलिन्डरलाई माया तथा जतन गरेर प्रयोग गरेमा सम्भावित दुर्घटना पनि हुँदैनन् । अरु ग्यास भन्दा आप्mनै ठाउँमा उत्पादन गरिएको ग्यास प्रयोग गरेर आर्थिक गतिविधी चलायमान बनाउन म आग्रह गर्दछु ।